समाचार Archives - Page 20 of 230 - Medianp
कञ्चनपुरमा पूर्वअध्यक्ष रानामाथि भारतीयद्वारा हमला
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४११:१३0
कञ्चनपुर, २३ भदौ । कञ्चनपुरको साविक दोधारा गाविसका पूर्वअध्यक्ष बेलबहादुर रानामाथि भारतीय लुटेराले बिहीबार हमला र लुटपाट गरेका छन् । भारतीय बजारबाट उपचार गरी फर्कने क्रममा नगरा नजिक तीनजना भारतीय लुटेराले हमला र लुटपाट गरेका हुन्
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४१०:२५0
गौशाला, २३ भदौ । प्रदेश नं २ मा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने दाउपेचमा लागेका राजनीतिक दलहरुद्वारा महोत्तरीमा आचारसंहिताको घोर उल्लङ्घन भइरहेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमा देशका ठूला राष्ट्रिय पार्टी — नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले),
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४१०:१०0
राजविराज, २३ भदौ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१५ स्थित खाँडो नदी नजिक ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परी बिहीबार साँझ त्यसका चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा राजविराज नगरपालिका–१० बिरोल बस्ने २५ वर्षीय पप्पु मण्डल रहेको राजविराज वडा प्रहरी कार्यालयले जनाएको
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४०८:१२0
कञ्चनपुर (सप्तरी), २३ भदौ । आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन कार्य सकिएलगत्तै स्थानीय प्रशासनको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन सुरक्षातर्फ केन्द्रित भएको छ । यसैक्रममा सुरक्षा समितिले गोप्य सूचना र
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४०८:०७0
दोलखा, २३ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोलखाका नेता राम ढुङ्गेल खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका छन् । कालिञ्चोक गाउँपालिकाका सह–संयोजक ३३ वर्षीय नेता ढुङ्गेल खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका हुन् । खुकुरी प्रहारबाट ढुङ्गेलको टाउकामा
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २२, २०७४१९:१०0
काठमाडौँ, २२ भदौ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम र संगठन तर्जुमा गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १९ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार आयोग गठन
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २२, २०७४१८:३९0
अच्युत रेग्मी काठमाडौँ २१ भदौ । यात्रु : पाँचवटा टिकट पाउँ न दाजु काउण्टरवाला : कहिलेका लागि होला ? यात्रु : दशैँका लागि । काउण्टरवाला : खुलेको छैन । यात्रु : कहिले खुल्ला ? काउण्टरवाला : थाहा भएन । यो सम्वाद हो काठमाडौँको
बाढी पीडितलाई १६ लाख बराबरको कम्बल सहयोग
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २२, २०७४१८:०७0
काठमाडौं, २२ भदौ । गैर–आवासीय नेपाली संघ क्षेत्रीय समिति यिवु चीनले हालै नेपालमा गएको बाढीबाट पीडित भएकाहरुलाई कम्बल सहयोग गर्ने भएको छ । तराईका अधिकांश क्षेत्रमा बाढी गएको भएपनि अतिप्रभावित क्षेत्रका पीडितहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी एनआरएन
भक्तपुर, २२ भदौ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले आव ०७३÷०७४ मा रु छ करोड ७७ लाख २० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १९१.१७ प्रतिशत वृद्धि गरी रु १२ करोड ९४ लाख ६० हजार संकलन गरेको छ
एक किलो पहेँलो पदार्थसहित विमानस्थलबाट ताइवानी नागरिक पक्राउ
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २२, २०७४१६:५१0
काठमाडौँ, २२ भदौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय परिसरमा यात्रु जाँच गर्ने क्रममा सुनजस्तो देखिने करिब एक केजी पहेँलो पदार्थसहित प्रहरीले एक ताइवानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । क्याथे ड्रागन एअरको उडानद्वारा हङकङबाट बुधबार काठमाडौँ
Previous 1 … 19 20 21 … 230 Next